साबधान ! हैजाको प्रकोप ह्वात्तै बढ्यो, घरकै खानाबाट पनि हैजा सर्न सक्ने - Mitho Khabar
साबधान ! हैजाको प्रकोप ह्वात्तै बढ्यो, घरकै खानाबाट पनि हैजा सर्न सक्ने
June 24, 2022 mithokhabarLeaveaComment on साबधान ! हैजाको प्रकोप ह्वात्तै बढ्यो, घरकै खानाबाट पनि हैजा सर्न सक्ने
काठमाडौ । उपत्यकाभित्र हैजाको प्रकोप बढिरहेको छ । बिहीबार पनि थप एक जना बिरामीमा हैजाको पुष्टि भएको छ । योसहित हाल टेकुस्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र पाँच जना हैजा ९कोलेरा०का बिरामी पुष्टि भएको छ ।
बिहीबार हैजा पुष्टि हुनेमा बल्खु बस्ने ३५ वर्षीया महिला हुनुहुन्छ । “उहाँले धारामा आउने पानी प्रत्यक्ष रूपमा पिउनु हुँदोरहेछ,” टेकु अस्पतालकी निर्देशक डा। मनीषा रावलले भने, “बिहीबार पनि पाँच जना बिरामी सघन उपचार कक्षमा उपचारत छन् ।” यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
अब उपत्यकामा हैजा ‘आउटब्रेक’ हुने स्थिति भइसक्यो भन्दै उहाँले यसैगरी हैजा बढ्दै जाने हो भने डरलाग्दो स्थिति आउन सक्नेतर्फ सचेत गरे । सबैलाई सरसफाइ, खानेकुरा तथा पिउने पानीमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै निर्देशक डा। रावलले हैजाबारे जनचेतना भएन भने नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुने स्थिति देखिएको बताए ।
पाइलट र एअर होस्टेसको यसरि गरियो अन्तिम बिदाइ, एकै परिवारका ७ जनाको अ’न्त्येष्टि, आफन्तको रुदा रुदै बेहाल (भिडियो)
ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो भैरहवाको पेट्रोलियम डिपो